फिर्ता लिन्नँ, बरु ३८ पेजकै बनाउँछु : प्रचण्ड – साँचो खबर
फिर्ता लिन्नँ, बरु ३८ पेजकै बनाउँछु : प्रचण्ड
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपामा शक्ति संघर्षले पार्टी एकता धरमराइरहेका बेला एक अध्यक्षबिनै स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै आइतबार बैठक बसेको हो। तर, ओलीले पत्र पठाएर आफ्नो अनुपस्थितिको कारण खुलाएका छन्।
तर, दाहालले आरोप/प्रत्यारोपको फायर पहिले प्रधानमन्त्रीले खोलेको भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेरै एउटा सार्थक निष्कर्ष खोजी गर्नुपर्ने बताए। ‘यो मैले ल्याएको नितान्त राजनीतिक प्रस्ताव हो। यसलाई कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि यो दस्ताबेज भइसक्यो अब। यसमै छलफल गरेर अब हामीले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ। मैले मेरो प्रस्ताव ठीक र उहाँ (प्रधानमन्त्री)को बेठीक भनेको छैन। दुवै जनाको प्रस्तावमा छलफल गरौं। छलफलबाट योभन्दा अझ उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर जान पनि सकिन्छ’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अब प्रस्ताव फिर्ता लिऔं भनेर मात्र हुन्छ ?
दुइटा अध्यक्ष मात्र मिलाएर मिल्ने विषय अब यो रहेन। यो सार्वजनिक भइसकेको छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक बहसको विषय भएर गइसक्यो। मेरो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय मात्र छन्। पार्टी एकतायताका विषय समेटिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले ३८ पृष्ठको आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो। तर, त्यहाँ उहाँले पार्टी एकताभन्दा पहिलाका विषय पनि सबै समेटेर ३८ पृष्ठको प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभयो। म त्यसको ३८ बुँदामा जवाफ दिन तयार नै छु। तर्कसंगत ढंगले यसलाई विस्थापन गर्न सकिएला तर फिर्ता हुँदैन।’ दाहालले झन्डै सवा घण्टा बैठकलाई सम्बोधन गरे। उनले समस्या कसरी निम्तियो भन्नेदेखि समाधानको बाटो के हुनेसम्ममा केन्द्रित रहेर धारणा राखेको ती स्थायी समिति सदस्यले बताए।
महासचिव पौडेलले बैठक एक साता रोक्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै दाहालले बैठकमा धारणा राखेका थिए। त्यसपछि एक साता बैठक स्थगन गर्ने निर्णय नेकपाले लिएको थियो। तर, केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तोक्ने विषयमा भने ओली पक्ष एकातिर र दाहाल–नेपाल पक्षका नेता अर्का पक्षमा उभिएर आआफ्ना अडान लिएका थिए। ओली पक्षका महासचिव पौडेल, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्बाङलगायतले केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तोक्न नहुने बताएका थिए। वेदुराम भुसाललगायतले भने मिति तोकेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अन्तत: पुस ५ मा केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने निर्णय स्थायी समिति बैठकले गरेको थियो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समितिको बैठक पुस ५ मा तय भएको जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा यो खबर छ ।
Previous: चितवनमा भेटिएका यी बिरामी पूर्वलडाकु !
Next: विश्वकै खुँखार आतंकवादी सूचीमा अबु बकर, टाउकाको मूल्य ८२ कराेड ५८ लाख !